Fampiharana fivezivezena dimy be indrindra | Androidsis
Ny maha-endrika azy dia tena zava-dehibe amin'ny ankamaroan'ny olona.. NY telefaona android mety ho fanampiana lehibe amin'ity lafiny ity. Andro vitsivitsy lasa izay dia niresaka momba izany isika fampiharana hampiasaina amin'ny gym. Saingy, misy fomba hafa hikarakarana ny tenantsika amin'ny fampiasana ny fitaovana Android. Afaka mihena mora foana koa isika noho ny fampiharana.
Raha mpampiasa te hanana endrika ianao na mieritreritra ny hanomboka sakafo dia azo antoka fa hahaliana anao ity lisitra ity. Avelanay eto ambany ianao miaraka a fisafidianana ireo fampiharana mavesatra indrindra. Vonona ny hianatra momba ireo rindranasa ireo?
Avelanay eto ambany ianao miaraka amin'ny lisitry ny rindranasa feno misy amin'ny Android hampihenana lanja dingana tsotra kokoa io. Mila ny finday Android fotsiny izahay ary tena maniry izany.
2 Kaonty kaloria - MyFitnessPal
4 Fahafatesana io!
5 Calorie Counter Pro - MyNetDiary
Mety momba ilay izy iray amin'ireo safidy malaza indrindra ny ankamaroan'ny mpampiasa. Noho ity fampiharana ity dia azonao atao ny manara-maso ireo hetsika ataonao isan'andro. Hanampy anao amin'ny fahombiazanao izany rehefa manao fanatanjahan-tena ianao. Fa koa araho ireo kaloria efa nodoranao. Ka manana fanarahan-dalàna marina ianao amin'ny fotoana rehetra. Izy io koa dia manana famolavolana tsara izay manamora ny fampiasana azy.
La maimaim-poana ny fampidinana app. Ho fanampin'izany dia tsy mahita fividianana na dokam-barotra ao anatiny izahay.
Kaonty kaloria - MyFitnessPal
Safidy iray fanta-daza sy malaza amin'ny fahombiazany tsara. Amin'ity tranga ity dia manana a fanaraha-maso ny kaloria lanintsika isan'andro. Manana tahiry miaraka Lovia sy sakafo 6 tapitrisa. Noho izany, ankoatry ny fahalalana ny kaloria ananany dia afaka misafidy izay mety indrindra amin'ny sakafontsika isika. Ho fanampin'izany, manana ny safidintsika isika scan ny kaody bara manamarina ny angon-drakitra momba ny sakafo amin'ny vokatra tsirairay. Manana torohevitra isan-karazany koa izahay.
La maimaim-poana ny fampidinana app. Saingy, nahita doka izahay, izay azontsika esorina amin'ny fandoavana vola iray.
MyFitnessPal: fomba fanao isan'andro
Developer: Ny orinasa MyFitnessPal, Inc.
Safidy lehibe iray hafa izay miavaka amin'ny maha iray amin'ireo mpanisa kaloria tsara indrindra azontsika atao ny mahita misy. Manolotra anay fampahalalana momba ny sakafo amin'ny lovia maro samy hafa. Noho izany, afaka mamorona menio mifanaraka amin'ny zavatra tiantsika isika na mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika. Ho fanampin'izany, mitondra a fanaraha-maso ny kaloria lanintsika isan'andro. Ka afaka manohy ny fanaraha-maso feno isika.
La maimaim-poana ny fisintomana ity rindranasa ity hanary lanja. Ankoatr'izay dia tsy misy doka na fividianana ao anatiny. Safidy tsara hafa hodinihina.
Counter Calorie FatSecret
Ny anaran'ny fampiharana dia efa mamela hevitra tsara momba ny fomba fiasany. Izy io dia fampiharana an'ny fampitaovana lehibe hamoahana lanja. Izy io koa dia iray amin'ireo rindranasa feno indrindra izay mety ho hitantsika. Araho ireo kaloria laninao isan'andro. Araka izany, ankoatry ny fahalalana azonao atao ny manara-maso amin'ny fotoana rehetra. Ka ny asany dia mazava be.
La maimaim-poana ny fisintomana ity rindranasa ity hanary lanja. Na dia, toy ny amin'ny maro hafa aza, dia mahita fividianana ao anatiny izahay.
Very It! Calorie counter
Calorie Counter Pro - MyNetDiary
Iray amin'ireo lafiny lehibe indrindra rehefa manapa-kevitra ny hihena isika dia sakafo. Tsy maintsy mahita sakafo mety amintsika isika. Enga anie izany ho salama ary hanampy antsika amin'ny tanjontsika. Noho izany, ity fampiharana ity dia safidy tena ilaina. Izy io dia manana tahiry feno tokoa miaraka amina fomba fahandro marobe sy sakafo mety tsara hampihena ny lanjany. Ny resipeo dia manokana amin'ny fampiharana, fa ny mpampiasa dia afaka mandefa ny azy manokana ihany koa.
Ankoatra izany, azontsika atao ny manara-maso ny lanja sy ny kaloria entina isan'andro. Maimaimpoana ny fampidinana ny fampiharana amin'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza izahay.
Antsika ity fifantenana miaraka amin'ireo fampiharana tsara indrindra hampihenana lanja. Sintomy fotsiny izy ireo amin'ny fitaovana Android anao ary atombohy amin'ny tanjonao izao. Noho ireo rindranasa ireo dia ho mora kokoa ny fanatanterahana an'io sy manara-maso hatrany amin'ny fandrosoanao. Efa nampiasa ny iray amin'ireo rindranasa ireo ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana tsara indrindra hampihenana lanja
Ny Galaxy Note 8 Novambra Security Update dia misy izao